The Ab Presents Nepal » रविको छवि ‘मिनी अख्तियार’ जस्तै थियो, घूस खानुअघि हरेक भ्रष्टहरुको दिमागमा रविको चित्र आउँथ्यो !
रविको छवि ‘मिनी अख्तियार’ जस्तै थियो, घूस खानुअघि हरेक भ्रष्टहरुको दिमागमा रविको चित्र आउँथ्यो !
नारायण गाउँले-: अनुसन्धानपछि अस्मिता कार्की निर्दोष देखिइन् भने के होला ? अनुसन्धानले अझ उनलाई नै ‘पीड़ित’ देखायो भने के होला ? निर्दोष देखिए छुटिहाल्छिन् नि’ भन्ने तपाईंको वाक्य कति हचुवा र असंवेदनशील छ भन्ने शायद तपाईं आफैलाई थाहा नहुनुपर्छ ।
हो, भीड़बाट कानुन निर्देशित हुनुहुँदैन । तर कानुन पहुँचमा हुनेहरूको स्वार्थले पनि प्रेरित हुनुहुँदैन । कानुन व्यक्तिपिच्छे फ़रक हुनुहुँदैन ।
रवि लामिछाने या अस्मिता कार्की दोषी हुनै सक्दैनन् भन्ने छैन । हुन पनि सक्छन् । तर उनको चरित्र र जीवनको सबैभन्दा ठूलो कमाइका रूपमा रहेको ‘करियर’ नै प्रभावित हुनेगरी पक्राउ गर्नुअघि नै अनुसन्धानको निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नु जरूरी थिएन ? धम्कीका कल डिटेल्स होलान्, टेक्स्टहरू होलान्, साक्षीहरू होलान्, तस्बीरहरू होलान् । के ती प्रमाण खोज्दै नखोजी सोझै पक्रिने र बदनाम गर्ने अधिकार राज्यलाई हुन्छ ? यदि प्रमाण छन् र ती दोषी हुन् भने अदालतमा मुद्दा दायर गर्न केले रोकेको छ ?
रविको छवि ‘मिनी अख्तियार’ जस्तै थियो । घूस खानुअघि हरेक सरकारी कर्मचारीको दिमागमा रविको चित्र आउँथ्यो । कतै यो रविकै मान्छेले फ़साउन घूस दिएको त होइन ? माफियादेखि मानव तस्कर र पुलिसदेखि सचिबसम्मलाई रवि ठूलो थ्रेट बनेका थिए । उनको व्यक्तिगत चरित्र कति स्वच्छ थियो त्यसको ग्यारेन्टी मैले लिने कुरो भएन तर उनको कारणले समाजमा केही हदसम्मको स्वच्छता थियो ! होला रवि आफैमा भ्रष्ट हुँदा हुन् तर तिनको कामले हजार जनालाई भ्रष्ट बन्नबाट रोकेको थियो, तर्साएको थियो । ‘यो ‘भीड़ रविको व्यक्तिगत होइन, त्यही ‘थ्रेट’को सम्मान हो । सप्रमाण र निष्पक्ष छानबिनमा रवि दोषी देखिए भने यो भीड़ आफै हराउनेछ । केही वर्षअघिको रविसँग यो भीड़ थिएन ‘।